तिहारबारे संस्कृतिविद्ध गुरुङको यस्तो छ दृष्टिकोण-Nepali online news portal
तिहारबारे संस्कृतिविद्ध गुरुङको यस्तो छ दृष्टिकोण
यमपञ्चक अथवा तिहारको दोस्रो दिन आज्ञापालक ‘श्याम र सबल नाम दिइएको कुकुरको पूजा गरिन्छ । यो दिन कुकुरको पूजा गरेर मीठामीठा खानेकुरा दिई खुसी पारे यमलोकमा यमराजको ढोकामा बस्ने कुकुरले बाटो छोडिदिन्छ भन्ने, धार्मिक मान्यता छ ।
संस्कृतिविद् एवं प्रा‍.डा. जगमान गुरुङ यम भनेको नियम हो, भन्दछन् । यस्तै योग, नियम, आसन भनिन्छ । यम भनेको नियम हो, नियम भनेको धर्म हो । डा. गुरुङ अगाडि भन्छन्, ‘यम अर्थात् धर्मराजसँग जोडिएको कथा पौराणिक कथा जोडियो, जुन पहिले थिएन । पहिले यमयदिको कथा थियो । अहिले यमराज र यमुनाको कथा छ । दाजुबहिनीको । ऋग्वेदी कालमा यमयदिको कथा थियो । वैदेशिक र पौराणिक संस्कृति धेरै फरक छ ।
डा. गुरुङले यमपञ्चकलाई मानव जातिको विकासक्रममा पाँच आयामसँग जोडेका छन् । उनले काग तिहारको प्रसंगलाई मान्छेको घुमन्ते जीवन भनेका छन् भने, कुकुर तिहारको प्रसंगलाई मानव जातीको सिकारी जीवनसँग जोडेका छन् । यस्तै, गाई पूजालाई धन आर्जन तथा मुद्रासँग जोडेका छन् भने, गोरु पूजालाई अन्न उत्पादन र उपभोगसँग जोडेका छन् । भाइतिहारलाई मानव सभ्यतासँग जोडेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘यो पौराणिक संस्कृति हो, तर त्यसमा वैदिक संस्कृतिको पनि झलक छ । यो यमपञ्चक मानव सभ्यता र संस्कृतिको विकासक्रम अथवा पाँचवटा श्रृङ्खला हो । मानिस सभ्य र सुसंस्कृत अवस्थामा त्यसै आएको होइन । पहिले मान्छे पनि पशुजस्तै थियो । त्यो पासिविक अवस्थाबाट सुधार हुँदै अहिलेको अवस्थामा आयो । ति पाँच चरण पार गर्दाको प्रतिक हो, यमपञ्चक अथवा तिहार ।’ हामीले डा. गुरुङसँग कुकुरतिहारबारे केही जिज्ञासा पनि राखेका छौँ ।
कुकुरलाई पनि यमदूत मान्ने हो ?
कुकुरलाई यमदूत । भैरवको वहान मानिएको छ । धर्मको प्रतिक पनि मानिएको छ । किन भने, महाभारतको कथामा पाँच पाण्डव द्रौपतिसहित स्वर्ग जाने भनेर उत्तरापन्थको बाटो भएर जादाखेरी कोही पनि स्वर्ग जान सकेन । युधिष्ठिर मात्रै ज्यूँदै स्वर्ग गए । युधिष्ठिरको साथमा एउटा कुकुर थियो । त्यो कुकुर धर्मको प्रतिक थियो भन्ने कथन छ । कुकुर त सिकारी हो । कुकुरको माध्यमबाट मान्छेले सिकार खेल्छन् । त्यसकारण कुकुर पूजाले मान्छेको सिकारी अवस्थालाई संकेत गर्छ । घुमन्ते जीवनपछि मान्छे जुनबेला सिकारी बन्यो । कुकुरले धर्मको रक्षा गर्दछ । अहिले त बेलायती कुकुर कोठाभित्र पाल्ने चलन बढेको छ । आफ्नै ओछ्यानमा सुताउँछन् मान्छेले सँगसँगै । मैले कसैलाई होच्याउन यसो भनेको होइन । तर, कुकुर भनेको ढोकामा बस्ने जात हो । दैलोमा बस्ने, घरको रक्षा गर्ने । द्वारपाल । कुकुर पूजा भनेको अथवा कुकुर तिहार भनेको सिकारी अवस्थाको संकेत हो ।
नरक चतुर्दशीकै दिन किन कुकुरको पूजा हुन्छ ?
अर्को एउटा मान्यता के छ, भने ? यमराजको ढोकामा कुकुर पालेर राखेको हुन्छ । अहिले ढोकामा लेखिएको हुन्छ नि कुकुरदेखि होसियार ! शास्त्रमा यमराजको ढोकामा कुकुर पालेर राखेको हुन्छ, भन्ने छ । त्यसैले कुकुरलाई खुसी तुल्याएपछि यमको ढोकाभित्र छिर्न पाइन्छ । यमको ढोकामा छिरेपछि त्यहाँ चित्रगुप्त हुन्छ पञ्जिकाअधिकारी रजिष्ट्रार । चित्रगुप्तले त्यहाँ पाप पुण्यको खाता हेर्छ, धर्मराजको यमसभामा । पशुपतिनाथको मन्दिमार बासुकी नागको मन्दिरतिर बाटोमा बाँयाँतिर भित्तामा यमराजको सभा छ । त्यहाँ चित्रगुप्तले तुलो जोख्छ, पञ्जिका पढ्छ । यमराज त्यहाँ बसेको हुन्छ । त्यस्तो किसिमको सभा छ नि त्यहाँ । त्यो लिच्छिविकालीन एउटा मुर्ति हो ।
त्यस कारण कुकुरलाई खुसी तुल्याएपछि यमको ढोकामा जान पाउने र नर्क जाने हो कि स्वर्ग जाने हो, त्यसको छिनोफानो हुन्छ,, यस्तो कुरा छ । गुरुङहरुको मान्छे मर्दा चार दिशातिर भातको डल्लो फ्याँक्छन् । त्यो किन भन्दा, यमराजको ढोकामा भएको कुकुरलाई कलो फालेको । कलो फालेपछि कुकुर खुसी हुन्छ, भन्ने छ ।